MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward MPT က FTTH အစီအစဉ်သစ်များကို သင့်တင့်သော စျေးနှုန်းဖြင့်မိတ်ဆက် - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
MPT က FTTH အစီအစဉ်သစ်များကို သင့်တင့်သော စျေးနှုန်းဖြင့်မိတ်ဆက်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ- ၂၇) – MPT သည် စျေးနှုန်းသင့်တင့်မျှတသော Fiber To The Home (FTTH) အင်တာနက်အစီအစဉ်သစ်များကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက် မှစတင်၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမည့် အကြောင်းယနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။
2 Mbps အမြန်နှုန်းအတွက် တစ်လလျှင် ၃၉,၀၀၀/- ကျပ်သာကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး အကန့်အသတ်မရှိ download လုပ်နိုင်မည့် MPT ၏ FTTH အင်တာနက်အစီအစဉ်သစ်သည် သုံးစွဲသူများအတွက် လူမှုမီဒီယာများ၊ မျာပြားလှသော မီဒီယာကဏ္ဍများ၊ download ရယူခြင်းများနှင့် ဖျော်ဖြေမှုများအတွက် အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ တပ်ဆင်ခနှုန်းထားများကို ယခင် ၂၀၀,၀၀၀/- ကျပ်မှ ယခု ၅၀,၀၀၀/- ကျပ်အထိ လျှော့ချပေးထားပြီဖြစ်ပါသည်။
အသစ်ပြောင်းလဲလိုက်သည့် နှုန်းထားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
အမြန်နှုန်း2Mbps5Mbps 10 Mbps
တပ်ဆင်ခ 200 000 Ks. ➞ 50 000 Ks.
လစဉ်ကြေး 39,000 Ks. 69,000 Ks. 109,000 Ks.
MPT-KSGM Joint Operations ၏ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr. Reizo Umeda က “မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းက သုံးစွဲသူတွေအတွက် fixed-line အင်တာနက် ထောက်ပံ့ပေးမှုနဲ့အတူ အရင်ကထက် ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး အကန့်အသတ်မရှိတဲ့ ဒီ fixed-line အင်တာနက်သုံးစွဲမှုကို စျေးနှုန်းသက်သက်သာသာနဲ့ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာပီတိ ဖြစ်ရပါတယ်။ ဒါဟာ သုံးစွဲသူတွေအတွက် ပိုကောင်းတဲ့ အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုအတွက် အသင့်တော်ဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးမြင့် FTTH အင်တာနက်လိုင်းနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ နေအိမ်တွေဟာ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ဖိုက်ဘာအင်တာနက်လိုင်းတွေကြောင့် အလွန်မြန်ဆန်တဲ့ အင်တာနက်အမြန်နှုန်းတွေကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကနဦးတပ်ဆင်ခကိုလည်း ၅၀,၀၀၀ ကျပ်အထိ လျှော့ချပေးထားပါတယ်။ အွန်လိုင်းအသုံးပြုဖို့လိုတဲ့ မိသားစုဝင်တွေ၊ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအပြင် ရုပ်ရှင်နဲ့ သီချင်းတွေကို ကြည့်ရှု နားဆင်လိုသူတွေအတွက် ဒီအစီအစဉ်သစ်ကနေတစ်ဆင့် အင်တာနက်ကို မိမိတို့အိမ်ကနေ အဆင်ပြေပြေ ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်စေပါလိမ့်မယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်သည့် မြို့နယ်များမှ MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ပိုမိုသိရှိလိုသော အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို MPT အမှတ်တံဆိပ်အရောင်းဆိုင်များတွင် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်နေ့မှစတင်၍ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ MPT အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ပိုမိုသိရှိလိုသော အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဝန်ဆောင်မှုစင်တာ ဖုန်းနံပါတ် 106 နှင့် 01-2399106 သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။